China Carbon eriri ikuku ikuku rụpụta na ụlọ ọrụ | Yan Tuo
Oge onu oriri di mkpirikpi: Ọ na - ewe naanị sekọnd 3 iji kewaa ma debe ahihia a na-atụgharị ya na tube akwụkwọ iji mezue onu oriri na mmegharị. Ọ dịghị mkpa ka a kwasasị akụkụ ọ bụla na njedebe nke osisi ahụ iji tinye aka na tube akwụkwọ.
Aluminom, eriri Carbon
Kdị niile nke Igwe na-emeghe winding
Nkenke di elu
1200 * 75 * 59 / Ka achọrọ
Ihe ngosi ngosi zuru ezu
Principlekpụrụ ọrụ: Site na mgbasawanye nke otu ikuku ikuku, igodo ahụ na-agbasawanye, a ga-ejikọkwa ogwe osisi ahụ.
Uru: 1. N'ihi usoro clip-on pụrụ iche ya, enwere ike dochie akpa ikuku ahụ n'ụzọ dị mfe mgbe ewepụtara isi shaft ahụ, na-enweghị mkpa ngwaọrụ pụrụ iche.
2. Ibu nke carbon fiber keyed inflatable shaft bụ naanị 1/3 nke ọdịnala inflatable aro, nke dị nnọọ mma maka ibu dị arọ na ntuziaka njikwa nke loading na ibutu. O nwere ike belata mmerụ ọrụ nke ndị ọrụ na njikwa, yana nwekwara ike melite arụmọrụ ọrụ.
3. A haziri usoro dị n'ime ya ka ọ ghara iwepụta mmebi ike n'ọhịa nke oke ọsọ.
4. Ike dị elu. Na ọdabara ka dị iche iche ngwa mkpa
5. Enwere ike iji ọgwụgwọ pụrụ iche dị iche iche na gburugburu ebe obibi pụrụ iche (enweghị ntụ, ntụpọ, gburugburu ebe obibi dị elu).
Jiri: Adabara maka retractable akụ nke mkpuchi, slitting, ebi akwụkwọ, rewinding, laminating, akwụkwọ Ndinam, akpa Ndinam, plastik na ndị ọzọ yiri ígwè, nke nwere ike n'ụzọ dị irè mma ọrụ arụmọrụ.
Ogwe mgbasawanye ikuku bụ winding pụrụ iche, ogwe mgbasa, ogbawanye mgbasa, igwe na-afụ ụfụ, oghere a na-afụ ọkụ, nrụgide nrụgide na na. Ogwe ahụ a na-afụ ọkụ na aka uwe a na-enye aka dị nnọọ mfe iji.
1. Short inflation operation time: Ọ na - ewe naanị 3 sekọnd iji kewaa ma debe eriri inflatable na tube akwụkwọ iji mezue onu oriri na mmeghari. Ọ dịghị mkpa ka a kwasasịa akụkụ ọ bụla na njedebe nke osisi ahụ iji tinye aka na tube akwụkwọ.
2. A na-etinye tube tube dị mfe: a na-akwali ma na-edozi tube tube na ọnọdụ ọ bụla na elu shaft na-arụ ọrụ nke ịkụ na ịgbanye.
3. Nnukwu ibu na-ebu ibu: A pụrụ ịchọpụta dayameta ọkpọ ahụ dịka mkpa ndị ahịa chọrọ n'ezie, a na-ejikwa ígwè siri ike mee ka ibu dị arọ.
4. Ọdịmma akụ na ụba dị elu: A na-emepụta aro ahụ dị ka ọrụ pụrụ iche, nke a pụrụ iji maka ụdị akwụkwọ mpempe akwụkwọ, mkpa, obosara na warara.
5. Nlekọta dị mfe na ogologo oge: Ọ bụ ezie na ogwe osisi a na-afụ ụfụ bụ ihe eji arụ ọrụ, akụkụ nke ọ bụla na nhazi nke ya nwere nkọwa akọwapụtara ma nwee ike iji ya na-arụ ọrụ, na-eme ka ọ dị mfe ilekọta.
Enwere 1 inch, 1.5 inch, 2 inch, 2.5 inch, 3 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, 12 ịgbatị aka uwe, wdg, dị ka ndị ahịa mkpa, dị iche iche nkọwa nke ikuku mgbasa osisi nwere ike esichara. ma mepụta.
Ogwe mgbasawanye ikuku nwere ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ: igwe ọ bụla nwere ịghagharị, ịtọpụ na ịmịchapu nwere ike iji mee ihe maka mgbasa mgbasa ikuku.
Kwesịrị ekwesị maka ngwa obibi akwụkwọ: Igwe ikuku, igwe na-ebi akwụkwọ flexo, igwe gravure, igwe eji ebi akwụkwọ na ihe ndị ọzọ.
Adabara ndị ọzọ n'ibu akụrụngwa: mkpuchi igwe, akpụkpọ anụ igwe, mwube igwe, embossing igwe, slitting igwe, anwụ ọnwụ igwe, akwụkwọ mpịakọta igwe, laminating igwe, laminating igwe, Film ịfụ igwe, ụfụfụ igwe, laminating igwe, embossing igwe, akwụkwọ igwe , igwe na-enweghị akwa, igwe nyocha igwe, igwe na-ekpo ọkụ ọkụ, akụrụngwa batrị na igwe ndị ọzọ metụtara ya na-akwado ojiji.
Osote: Carbon fiber license plate efere